I-Germany Visa A1 Exam ne-Reunion Yomndeni
Kwezemfundo yaseJalimane, izinga le-A1 libhekwa njengesiqalo. Sikunikeza uhlu lwezihloko ze-A1 zaseJalimane kule ndatshana. Izinga abantu abafuna ukufunda isiJalimane abavame ukulidinga futhi badinga ukulifunda ileveli ye-A1.
Izihloko zimboziwe nempumelelo yabafundi Izifundo ze-A1 Level German zizonikezwa ngamaqembu ngaphansi kwalesi sihloko.
1. Mina nombuthano wami oseduze
Ngaphansi kwalesi sihloko, abafundi baqala babhekane nendaba yokujwayela futhi bafunde ukubingelela, ukujwayela imisho, ukunika imvume nokwenqaba, ukucela ukuthethelelwa, nokucela okuhle. Isinyathelo esilandelayo ukufunda izinhlamvu zesiJalimane. Ngemuva kwe-alfabhethi, kuyafundwa ukuthi zingafundwa kanjani izinombolo nokuthi izinombolo zibhalwa kanjani. Abantu abafunda lezi zihloko bangazethula kalula. Bangakwazi ukuveza ukuthi bangobani, baneminyaka emingaki nokuthi bavelaphi, bahlala kuphi.
2. Ukuphila Kwansuku Zonke
Ngaphansi kwalesi sihloko senhlanzi, abafundi balwazi kahle ulimi lwasekilasini. Bazuza amandla okuveza imisebenzi ejwayelekile ngokufunda ukubiza amagama nokupela kwamawashi. Bafunda ukutshela lokho abanakho noma cha ngendaba yobunikazi. Futhi bathola ulwazi lokubuza imibuzo, enye yezinkinga ezibaluleke kakhulu.
3. Imibono Nezincazelo Zabantu
Izihloko ezihlanganiswe ngaphansi kwalesi sihloko ubuchwepheshe, buchaza okwenzekayo okusizungezile, izitho zomzimba nokwethulwa kwabo, yiziphi izingubo nokudla. Ngemuva kwalezi zifundo, abafundi baqala ukufunda isiJalimane ngendlela yokuthi bakwazi ukwenza imisebenzi yabo yansuku zonke.
4. Isikhathi Nesikhala
Ngezifundo ezifundiswe ngaphansi kwalesi sihloko, indawo nemvelo kuyafundwa, izinsuku, izinyanga nezinkathi zesonto ziyaqashelwa, ziyini izinto zokuzilibazisa nokuthi kufanele zivezwe kanjani.
5. Impilo Yomphakathi
Ungafunda ngesihloko sokugcina, impilo yezenhlalo nokuthenga iJalimane, indlela yokwenza imisho esimemweni oya kuso, ukubhuka okufanele kwenziwe ngenkathi usohambweni namaphethini wemisho ahlobene nawo, nezingxoxo ezisetshenziswa njalo ngempilo yansuku zonke.
Izifundo ZaseJalimane Zabaqalayo Ezingeni A1
Imibhalo ethile ngesiJalimane
Imibhalo Engaqondakali YaseJalimane
Izakhiwo zamagama esiJalimane
Ubuningi baseJalimane, amagama amaningi aseJalimane
Amafomu wegama lesiJalimane
Igama lesiJalimane Hali Akkusativ
Ungazisebenzisa Kanjani Futhi Kuphi Izindatshana ZaseJalimane
IsiJalimane Was ist das Umbuzo nezindlela zokuphendula
Ake Sifunde Ukwenza Umusho WaseJalimane
Imisho Elula YesiJalimane
Izibonelo Zemisho Elula ngesiJalimane
Izigaba zemibuzo yaseJalimane
Izigaba eziningi zaseJalimane
Isikhathi Samanje SaseJalimane - iPrasens
Isihlanganisi Sesenzi Sesikhathi SesiJalimane
Ukusetha Isigwebo Senkathi Yesikhathi SaseJalimane
Amakhodi Esampula AseJalimane Akhona
Izinombolo Ezijwayelekile ZaseJalimane
Amakhodi Wokujola WaseJalimane
Bangani abathandekayo, siyakholelwa ukuthi uma uqala ukufunda izifundo zethu zamazinga we-A1 aseJalimane ngokulandelana esikunikeze ngenhla, uzobe usuya kude ngesikhathi esifushane. Ngemuva kokufunda izihloko eziningi kangaka, manje ungabheka ezinye izifundo kusayithi lethu.